DHEGEYSO: Sweden, waxaa adkaan doonta inaad iska qaadato KAARKA HADALKA! (Sabab?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Sweden, waxaa adkaan doonta inaad iska qaadato KAARKA HADALKA! (Sabab?)
DHEGEYSO: Sweden, waxaa adkaan doonta inaad iska qaadato KAARKA HADALKA! (Sabab?)
(Stockholm) 28 Agoosto 2019 – Dadka gala dembiyada abaabulan ayay ku adkaan doontaa inay ku hoos dhuuntaan telefoonnadooda iyagoo adeegsanaya simi kaadho haybtoodu qarsan tahay oo ay telefoonada ku isticmaalaan. Dowladda Sweden ayaa haatan gacanta ku haysa hindise qabyo ah oo dhigaya in la diiwaan geliyo dadka iibsanaya kaararka telefoonnada.
Iminka waxaa caadi ah inuu qofku jidka kasoo qaato kaarka kaddibna uu isticmaalo isagoo is qarinaya, taasoo hay’aadka amaanka sida Nabad Sugidda Säpo ku adkaynaysa inay lambarka wax wacay ku xiriiriyaan qofka la tuhunsan yahay ama ay xitaa dhegeystaan. Wasiir Gudeedka Sweden Mikael Damberg ayaa ka sheekaynaya sababta go’aankan.
“Waxaan go’aansannay inaan dib u eegis ku samayno haddii aan sharci darro ka dhigi karno in la haysto kaar aan diiwaan gashanayn, waana baahi ka timid dhanka Booliiska iyo Nabad Sugidda,’’ ayuu yiri.
Dalal badan oo reer Yurub ah ayaa leh sharciyo qofka ka dalbanaya inay is diiwaan geliyaan marka ay iibsanayaan simi kaadh, balse dowladda Sweden ayaa sheegtay in hindisahan qabyada ah ee ay iminka gacanta ku haysaa uu diyaar noqonayo xagaaga 2020, gaar ahaan bisha Juun.
Wuxuu hindisahaahi hay’ad kasta oo isgaarsiineed ka dalbanayaa in la diiwaan geliyo xogta qofka karaka iibsanaya, kaddibna nuqul ka mid ah lala wadaago hay’aadka amaanka.
Waxaana ugu wacan, hay’adda Nabad Sugidda Säpo ayaa ogaatey in kooxaha xag-jirka ah ee Suuriya iyo Ciraaq ay inta badan adeegsadaan telefoonno aan haybtoodu muuqan. Wasiir Damberg markale.
”Khidaddan telefoonka aan diiwaan gashanayn waxaa adeegsada gaangiska, balse sidoo kale waxaa muuqata inay in badan adeegsadaan argagixisada xiriirka ku leh Sweden,” ayuu daba dhigay Damberg.
Dhanka kale, Booliiska Sweden ayaa warqad bishii Nofeembar ee sanadkii tegey u direen Wasaaradda Cadaaladda waxay ku codsadeen in la siiyo awood dheeraad ah, sida inay geli karaan oo baari karaan guryaha lagu tuhmayo kooxaha dembiilayaasha ah, iyadoo aysan jirin dembi mucayin ah oo xilligaa la daba socdo iyo in dadka qaar laga mamnuuco inay tagaan goobaha qaar, haddii ay tagaanna dembi lagu qaado.
Previous articleBaro QIIMAHA ay kugu fadhiso kayma roobaadka AMAZON ee holcaysa!! (Somalia maku taal dhirtani?)
Next articleIsticmaalka Facebook oo ay dhici karto in LACAG laga dhigo!!